Ubukhulu (Sq Ft): 5445
Amakamelo we-05 Master ubukhulu Bed Amakamelo okugeza anwetshiwe- Umsebenzi omuhle weenkuni, zoke iinkuni ze-teak / i-ash izinkuni ezisetshenziswe eBungalow- House zitholakala eduze nepaki / mosque- Double story house- Wiring ephelele ye-UPS ne-Generator yenziwe endlini- Umsebenzi wensimbi oqinile osetshenzisiwe ngoba ngaphandle kwesango elikhulu- Izicabha ezi- Sliding- ephelele i-marble / tiles / flooring yokhuni- Geza amakamelo ngokuphelele embozwe amathayela aseSpain- Konke ukwakhiwa eduze nasendlini kuyintsha- Indawo entsha eluhlaza okotshani- Abatshali bezimbali nxazonke ngebhande eliluhlaza- utshani obuhle obuhambisana izinhlobonhlobo eziphelele zokutshala- Imigwaqo eseceleni ilungele ukumbozwa ngothayela- Ukubhekana nePaki- House kuqedelwa ngokwemithetho yemithetho- Ikhishi elifakiwe ngokusetshenziswa okusebenzayo kwayo yonke impahla yokupheka- I-Top Corian esetshenziselwa ekhishini- Umsebenzi wensimbi oqinile osetshenziswa kumakhabethe- Izibani ukuhlinzeka kuwo wonke amakhabethe ekhishi- Imishini ephelele engeniswa efakiwe ekhishini ifaka Ukupheka i-Hob / Microwave / TV- Fall Ceiling kwenziwe konke kubandakanya amakamelo okulala / umdwebo / isidina kanye nekhishi- Ukuvikelwa kwekhasi lephepha ngenkathi kwakhiwa amashidi okusiza ekhaya okufakwa ngenkathi kwakhiwa ingxenye engenhla yokugcina zombili izingxenye zipholile ehlobo- Izitebhisi eziqinile ezakhiwe ngomsebenzi wensimbi kanye nogranite olusetshenziselwa ubuhle bangaphandle bendlu yithala lelo. Kutholakala maphakathi nendlu okunikeza umuzwa olusha njalo kusuka kuwo wonke amakamelo kanye nendawo yokuphumula ye-tv- Indawo yokugeza iyalawulwa ngakwesobunxele emuva kwendlu- Ikota yabasebenzi ngebhaji enamathiselwe. Umndeni wobukhulu obuphakathi ungahlala kalula kuwo. - Ubukhulu obuhle bezindlu zokugezela ezinama-wardrobes amakhulu kuwo. - Imibukiso yemvula ifakiwe ezindlini zokuwasha- ukuphakama kwe-Superb- ukubukwa okuhlukile kusuka ithala. Ithala elikhulu lapho umuntu angaba khona kalula indawo enhle yokuhamba nendawo enhle yokuhlala. - Kufakwe ithangi lamanzi elingaphansi komhlaba. - Club Community Center namathuna nje imizuzu 5
Xhumana nomkhangisi +92321444xxxx